‘प्रफमर अफ दि डे’ को उपाधि रविलाई ! [भिडियाेसहित] - Everest Dainik - News from Nepal
‘प्रफमर अफ दि डे’ को उपाधि रविलाई ! [भिडियाेसहित]
काठमाडौं, मंसिर ७ । एपीवान टेलिभिजनबाट प्रसारण भइरहेको ‘नेपाल आइडल सिजन-२’ अन्तर्गत बिहीबार आइडलका प्रतिस्पर्धी रवि ओड ‘स्टाइलिस प्रफमेर अफ दि डे’ बनेका छन् । उत्कृष्ट प्रस्तुतिकै कारण उनी बिहीबार ‘स्टाइलिस प्रफमेर अफ दि डे’ बनेका हुन् ।
रविले संयुक्तरुपमा गायिका टिका प्रसाइँसँग ‘नाई मलाई थाह छैन’ बोलको गीत गाएका थिए । रविको प्रस्तुति विगत अंकभन्दा अझैँ बिहीबार झन् राम्रो थियो ।
याे पनि पढ्नुस नेपाल आइडलका प्रतिस्पर्धी रवि वड धनगढी जाँदै
रविले यसअघि कार्तिक २४ गते शुक्रबार पनि ‘स्टाइलिस प्रफमर अफ दि डे’ को उपाधि पाएका थिए । उपाधिसँगै उनले ओप्पोको एउटा मोबाइल सेट पाएका छन् ।
रबिलाई भोट दिन मोबाइलको Message Box मा गएर १० टाईप गरी ३१००९ मा पठाउनुपर्ने हुन्छ ।भोटिङ बिहीबार राति ८ः३० बजेबाट खुल्ला हुने छ र शुक्रबार बिहान १२ बजेसम्म गर्न सकिने छ। विदेशमा बस्नेहरुले Rise and respect app डाउनलोड गरी उनको कोडमा गई भोट गर्नुपर्ने हुन्छ ।